ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ ကိုရီးယားက ဘုန်းကြီးစာသင်သား(၁) ~ pyidawoo
ကျောင်းပြန်ရောက်လို. နာရီကြည့်လိုက်တော့ ည (၇)နာရီခွဲ။ ညနေ (၄)နာရီစ (၇)နာရီမှာဆုံး (၃)နာရီလုံးလုံး။ သင်မှသင်နိူင်ပေ့။ ပရော်ဖက်ဆာ 염동룡။ တရားဟောဘုန်းကြီး ပလ္လင်ပေါ်ထိုင်ပြီး အပေါ်စီးက ပြောခဲ့သမျှ ဒီရောက်မှ ဝဋ်လည်ပြီ ထင်တယ်။ အတန်းအပြီး တက္ကသိုလ်ကနေ ကျောင်းအရောက် ခြေလျင်လျှောက်တာ နာရီဝက်ကြာတယ်။ ရောက်မဆိုက်
ဒကာလှမင်းထွန်း ဖျော်ကပ်တဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်နဲ. ဟာနေတဲ့ဝမ်းကြောင့် ချိနေတဲ့ခါးကို အားဖြည့်လိုက်ရတယ်။ဘုရားခန်းမှာ ကိုးကွယ်ထားတဲ့ ဓမ္မစင်္ကြာပန်းချီကား ဘုရားဖူးရင်း .....
အင်း --- ဒီနေ. ဘာသင်သွားပါလိမ့်။ International & Area Studies ဘုန်းကြီးနဲ. ဘီးလို မနီးတဲ့ ဘာသာရပ်။
သင်တာကက “ကုလသမဂ္ဂနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ.အစည်းများ အကြောင်း” စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက ပရော်ဖက်ဆာရဲ. အတွေးခေါ်နဲ. သင်ပုံသင်နည်း။ ရည်ညွှန်းစာအုပ်ကြီးဖတ်ရတာ academic writting ကျမ်းကြီးကျမ်းခိုင် စာသံပေသံကြီးနဲ.ဆိုတော့ ဖတ်လို. မပြီးတော့ဘူး။ သူသင်သွားတော့လည်း သိပ်မခက်ပါဘူး။
စိတ်ထဲမှာ ကျန်နေခဲ့တာက သူ.ရဲ. အတွေးအခေါ်။ “ကုလသမဂ္ဂလို နိူင်ငံစုံ အဖွဲ. အစည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိူင်ငံတစ်နိူင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစု တစ်ခုနဲ. အတူတူပဲ။
အဖေက ပျော.စိပျော.ညံ့ လူဖလံလေးဆိုရင် တခြား ကျားကျားလျားလျား ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကြီးတွေနဲ. ယှဉ်လိုက်ရင် အရှုံးကြီးပဲ။ ထီခနဲဆို ကွဲပေါ.။ ဒါဆို သားသမီးတွေက မလုံခြုံဘူး။ အဖေကိုလည်း အားမကိုး မကြောက်တော့ဘူး။ အပြင်လူသူစိမ်းအားကြီးသူကို အားကျ အားကိုးတော့မှာပဲ။ ဒါကြောင့် မိသားစုမှာ အဖေက အားရှိရမယ်။
နောက် အဖေက ငွေမရှာနိူင်ရင် သားသမီးတွေ အထင်မကြီးဘူး။ ငွေရှိသူ တစိမ်းကို ခယညွတ်တွား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ရောင်းစားကြလိမ့်မယ်။ တို. အမျိုးက ဘာဂုဏ်ယူစရာရှိလို.လဲပေါ.။ ဒါကြောင့် မိသားစုမှာ အဖေက ငွေရှိရမယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ချက် အဖေက ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းရမယ်။ မဟုတ်ရင် သားသမီးက မလေးစားနိူင်ဘူး။ သူတို. ကိုယ်သူတို.လည်း တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိတော့ဘူး။ အဖေ တန်ဘိုးမရှိတာ သူတို.သိနေမှတော့ သူတို.မှာ ဘာမျှော်လင့်စရာရှိမလဲ။
အတူတူပဲ နိူင်ငံစုံအဖွဲ.အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ် နိူင်ငံတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ် ၁- အားရှိရမယ်။
နိူင်ငံရဲ. အားဆိုတာ စစ်ရေး
နိူင်ငံရဲ. ငွေက စီးပွားရေး
နိူင်ငံရဲ. ကိုယ်ကျင့်တရားက နိူင်ငံရေး (ဥပဒေ)
ဥပဒေနဲ. အညီအုပ်ချုပ်တဲ. ကိုယ်ကျင့်ကောင်းတဲ. အစိုးရ
အဲဒီ အားသုံးမျိုးထဲမှာ အကြီးဆုံးအားက ကိုယ်ကျင့်တရား။
ကိုယ်ကျင့်တရား ဥပဒေကောင်းတဲ့ အစိုးရက အားလုံးကို အောင်လိမ့်မယ်” တဲ. ။
ည ၁၂နာရီခွဲပါပေါ့လား။ မနက်ဖြန်လည်း ကျောင်းသွားရဦးမယ်။
ဝါး~~~~~ ကိုရီးယားက ဘုန်းကြီးစာသင်သား
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရနှင့် ဝိပဿနာ တရားတော် တတိယနေ့အော...
၁၁/၄/၁၀ ရက်နေ. ဂွမ်ဂျူးတရားပွဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရနှင့် ဝိပဿနာ တရားတော် ဒုတိယနေ့
တရားပွဲ အားခဲ၍ လာစေချင်
စနေ တရားပွဲ ပထမနေ.
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရနှင့် ဝိပဿနာ တရားတော် ဖွင့်ပွဲးေ...
ခီလ်ဆန်းင်ဆာ (길상사) ဂွမ်ဂျူး တရားပွဲ